Hay’ad Mareykanka ka dalbatay magdhow dadka ku waxyeelooba duqeymaha Somalia | SMC
Home WARARKA MAANTA Hay’ad Mareykanka ka dalbatay magdhow dadka ku waxyeelooba duqeymaha Somalia
Hay’ad Mareykanka ka dalbatay magdhow dadka ku waxyeelooba duqeymaha Somalia
Hay’adda xaquuqda Aadanaha ee Amnesty Inetrnational ayaa waxaa ay ka jawaabay Warbixintii kasoo baxday Taliska ciidamada Maraykanka ee ka hawlgala qaaradda Afrika ee AFRICOM oo lagu qirtay in duqeyn uu Mareykanak ka geystay Aaga degmada jilib ay ku waxyeeloobeen dad rayid ah.
Qoraal kasoo baxay Amnesty Inetrnational ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay markii ugu horreysay ee AFRICOM ay xaqiijiso warbixin ku saabsan khasaaraha rayidka ee kasoo gaaray duqeymaha ay ka fuliyaan Soomaaliya oo ay baaris ku sameysay hay’adda Amnesty International.
“Qirashadaan Mareykanka ayaa ah kiiskii saddexaad oo ay xaqiijiyeen 13 sano oo duqeyn xagga cirka ah ee Soomaaliya dhacday. Hadda oo ay jiraan qirasho wax qabadkooda, waa inay jirtaa isla xisaabtanka iyo magdhawga dhibbanayaasha iyo qoysaskooda ayaa lagu yiri” Warka Amnesty Inetrnational.
Hay’adda Amnesty Inetrnational waxaa ay sheegtay in AFRICOM ay horumar la taaban karo ka qaadatay qirashada dhibaatooyinka shacabka kasoo gaara duqeymaha ay ka fuliyaan Soomaaliya,hayeeshee looga baahan yahay inay ka hortagaan dhibaatooyinkaas rayidka ah marka ugu horreysa, iyo sidoo kale inay hubiyaan sida ay u dhacayaan duqeymaha.
Mareykanka ayaa waxaa uu duqeyn dhinaca cirka ah ka fuliyaa magaalooyin badan oo kamid ah dalka,waxaana uu sheegaa in uu u dilo Saraakiil ka tirsan ururka Al-Shabaab & Daacish, waxaana mararka qaar ku waxyeelooba dad rayid ah.
Previous articleBeesha caalamka: Arrintii ka dhacday barlamaanka ma wiiqayso dadaallada laga gaarayo doorashooyin la isla ogol yahay
Next articleMa Run Baa In Villa Soomaaliya Diiday Kulamadii Aqalka Sare?